Iphrinta ye-UV ephathekayo e-USA China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-UV ephathekayo UK,I-UV Flatbed Printer Te Koop,Iphrinta ye-UV ephathekayo eTaiwan
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Iphrinta ye-UV ephathekayo e-USA
Iphrinta ye-UV ejwayelekile ye-UV ingaphrinta noma yisiphi isithombe namazwi odongeni, itileyili ye-ceramic, ingilazi, iphepha, ingxobo njll yokuhlobisa nokukhangisa.
Iphrinta ye-UV ebizwa ngokuthi i-UV Flatbed i-USA uhlobo oluthile lokusebenzisa imishini ye-digital type ye-ink ye-jet, i- UV iphrinta ebhalwe iphrinta ye-UK iningi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
3. i-inkinobho ebalulekile yepompo esebenzayo, bese ubeka insiza ukupompa i-inki engcolile.
Izici eziwusizo zephrinta lethu le- UV Flatbed Te Koop RF-A3UV:
3. Iphrinta ye-UV ephathekayo eTaiwan I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iphrinta ye-UV ephathekayo Intengo ephansi Xhumana Nanje
Icala lefoni yephrinta ye-UV Xhumana Nanje
Amanani wephrinta e-UV aphezulu Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV iphrinta ifomethi encane Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephathekayo e-USA Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephathekayo UK I-UV Flatbed Printer Te Koop Iphrinta ye-UV ephathekayo eTaiwan Iphrinta ye-UV ephathekayo A4 Iphrinta ye-UV ephathekayo Ebay Iphrinta ye-UV ephathekayo yaseKorea Iphrinta ye-UV ephathekayo i-Mutoh Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Mumbai